Ahoana no famakafaranao ny fampisehoana SEO? Torohevitra 6 avy amin'ny manam-pahaizana momba ny Semalt
Biby mistery ny fikarohana fikarohana. Ny mpiambina vavahady matanjaka rehetra, dia mila miantoka izy ireo fa tsy manome afa-tsy ny valiny avo indrindra sy ny vokatra mifanaraka amin'ny mpampiasa azy ihany no andefasana azy ireo, fandrao manosika azy ireo hisafidy hafa.
Mba hanaterana ny valin'ny fikarohana momba ny kalitao toy izany, ny motera fikarohana dia mila miantoka fa ny algorithm tena ampiasain'izy ireo amin'ny laharana fikarohana dia mijanona ho tsiambaratelo fiarovana. Rehefa dinihina tokoa, raha misy fikambanana mahalala ny tena mombamomba azy dia afaka manararaotra azy ireo izy ireo mba hiakatra ireo laharana.
Ao amin'ny flipide, ny milina fikarohana dia tsy maintsy manome famantarana ny tranonkala ny amin'izay mety hanampy azy ireo ho tsara, raha tsy izany, ny olona rehetra dia mihazakazaka manodidina. Amin'ny maha-milina fikarohana fikarohana toa an'i Google, Yahoo! ary Bing dia nanolotra andian-tsarimihetsika fikarohana optimization (SEO) fikarohana - lisitry ny toetra izay zarain'ny tranonkala ambony indrindra.
Ary ireo toetra ireo no fototry ny famakafakana SEO.
Fa maninona aho no mila mandinika ny asan'ny SEO ataoko?
Nanamboatra tranokala ianao. Nanaraka ny fotokevitra fototra an'ny fikarohana fikarohana ianao. Narotsakanao ho eterika ny tranokalanao. Nahoana ianao no mila mandinika ny fampisehoana SEO ataonao?
Misy antony roa lehibe.
Voalohany indrindra dia ny fahalalana no hery. Mazava ho azy fa mety efa nanamboatra ny tranokalanao 'tamin'ny alalàn'ny boky' ianao, saingy tsy fantatrao tsara hoe manao ahoana ny fahombiazany mandra-panandranao izany. Mety ho efa nanatsara ny tranokalanao saika tonga lafatra tokoa ianao, saingy ny mpifaninana anao dia nahavita nanatsara ny endriny somary tsara kokoa, ary mbola misy asa tokony hataonao. Amin'ny famakafaranao ny fampisehoana SEO azonao atao ny mamantatra ireo sehatra manan-danja amin'ny fanatsarana, ary hamindra ny mpifaninana amin'ny laharana.
Faharoa, ao anatin'ny toetran'ny fiovana tsy tapaka i SEO. Ho fanatsarana hatrany ny kalitaon'izy ireo ary hijanona dingana iray alohan'ny tranokala, Google, Yahoo! ary i Bing dia nandefa hatrany ny algorithm. Midika izany fa izay nahatonga anao nankany amin'ny tampon'ny laharana tamin'ny herinandro lasa dia mety tsy voatery ho tonga eo aminao amin'ity herinandro ity. Raha ampitahaininao ny fomba fanao SEO tsara indrindra ankehitriny amin'ny fomba fanao tsara 10 na 15 taona lasa izay, mampientam-po ny fiovana. Ity lisitry ny fanavaozana Google algorithm ity dia natao ho an'ny famakiana mahafinaritra.
Manatsara ny tranokalanao ny famakafakana ny asanao SEO ary manampy anao ny mihetsika amin'ny fiovanao. Tena ilaina ho an'ny olona maniry ny ho any an-tampon'ny laharana ary mijanona eo.
Ka ahoana no hanaovanao famakafakana ny SEO?
Ny fomba 6 lehibe hamakafakana ny asanao SEO
Ny famakafakana manan-danja amin'ny asanao dia miankina amin'ny fitsipika lehibe enina izay mijanona ho tsy miovaova hatramin'ny tantaran'ny SEO-ny endri-javatra no fototry ny Semalt Analytics. Andao hojerentsika tsirairay.
Ny famakafakana teny
Rehefa namorona teny na fehezanteny iray ao amin'ny Google ny mpampiasa iray dia lasa hery manosika ny fikarohana izany. Azo antoka fa ny Google dia afaka mandinika ny toerana misy ny mpampiasa, na ny mombamomba ny olona namboariny nandritra ny taona maro, fa ity fampahalalana ity dia manampy sira sy paiso fotsiny ho an'ny fikarohana. Ny teny fanalahidy no vilia lehibe.
Rehefa apetrak'i Google amin'ny alàlan'ny World Wide Web ny valin-tenin'izy ireo hikaroka ireo teny fanalahidy ireo dia ho tratra ve ny tranonkalanao? Fantatrao ve ireo teny fanalahidy mifandraika rehetra tokony atoro amin'ny tranokalanao raha omena ireo vokatra amidy sy ny indostrian-dry zareo? Raha fikambanana rafi-pianakaviana any Londres ianao, izany no vokatry ny 'London law'? Raha fivarotana pizza ao Brooklyn ianao, vokaranao amin'ny 'pizza Brooklyn' ve ianao? Ireo dia ohatra tena ilaina mba hanehoana ny foto-kevitra; lalindalina kokoa ny famakafakana ny teny fanalahidy sy ny optimization.
Ny famakafakana ny teny dia mamaritra ireo teny fanalahidy izay tokony hifantohanao sy ny toerana tokony hametrahana azy ireo ao amin'ny tranonkalanao. Ny fametrahana ireo teny fanalahidy lehibe amin'ireo faritra hita maso toa ny lohateny sy metadata dia hiantoka fa hahita azy ireo ny milina fikarohana.
Tany am-piandohan'ny fikarohana tany amin'ny Internet dia nitady fomba iantrana i Google. Nahatsapa izy ireo fa amin'ny alalan'ny fianteherana tanteraka amin'ny teny fanalahidy dia hahita ny fametrahana ny teny fanalahidy ' tranokala ' ny tranokala any amin'ny toerana rehetra ahafahany miakatra ao an-tampon'ny laharana. Noho izany dia nahitana vahaolana maranitra izy ireo: nandinika rohy izy ireo.
Tsotra ny fisainany: ny fampifandraisana bebe kokoa avy amin'ny loharano ivelany avy amin'ny tranonkala iray, ny kalitao avo kokoa izay. Io no antony ahitanao hatrany ny Wikipedia eo an-tampon'ny fikarohana — tsy miraharaha indrindra ny fikatsahana teny fatratra izy ireo, fa raha ny filazan'ny loharanom-baovao azo atokisana indrindra amin'ny Internet, ny tranonkala hafa dia miverina mankany Wikipedia mandritra ny fotoana rehetra, mampitombo hatrany ny maha-ara-dalàna ny tranokala. . Raha mbola tsy tsikaritrareo ianao dia nifandray tamina lahatsoratra Wikipedia tany amin'ny paragrafy etsy ambony.
Ny fananganana rohy dia manana anjara toerana lehibe ao amin'ny SEO. Ny famakafakana ny rakitry ny tranonkalanao, na ao anatiny na ivelany, dia ilaina amin'ny fahatakarana ny hoe 'hajaina' ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny motera fikarohana. Matetika ny votoatiny dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanatsarana ny fampitana rohy, satria mila manome tranonkala hafa ianao ny antony tena mampifandray anao.
Manao ahoana ny fahombiazan'ny tranokalanao? Ny moto fikarohana dia mandefa 'mpandia tranokala' izay mizaha amin'ny fomba tsy miangatra amin'ny Internet ary manondro ny atiny. Ny fahatoniana ananan'izy ireo ny fampahalalana ilaina dia antony iray ao amin'ny SEO.
Hevero io ho fitsangatsanganana fiantsenana. Ho an'ny mpandady tranonkala iray toa an'i Googlebot , ny tranonkala voaorina dia ho toy ny fandehanana amin'ny tsenambarotra vaovao iray - feno avokoa ny zava-drehetra, misy marika mazava ary apetraka amin'ny fomba mora takarina. Ny tranokala ratsy fanahy iray dia toy ny miantsena amidy amina garazy, tsy misy fikambanana, tsy misy marika ary zavatra hafahafa atsipy na aiza na aiza.
Ny famakafakana tranokala dia mifantoka amin'ny faran'ny tranonkalanao. Manampy anao hahatakatra ny fomba mora hivezivezan'ny mpiasan'ny tranokala ny tranokalanao hahitana ny mombamomba anao. Manome anao lisitra fanatsarana azonao atao hanatsarana izany fotodrafitrasa izany.
Malaza sy malaza ary mahatoky ny marinao, tsy avy amin'ny fomba fijerin'i Google ihany, fa eo imason'ireo mety ho mpanjifa koa?
Ny fanaraha-maso marika feno dia manome fomba fijery misimisy kokoa momba ny fanatrehanao an-tserasera — tsy eo amin'ny tranonkalanao fotsiny izany, fa eo amin'ny famerenam-bokatra toa ny Google, Facebook, Trustpilot ary Glassdoor, ary manadihady ny zava-bita amin'ny Internet amin'ny ankapobeny. Manampy anao izany hahatakatra ny fomba fijerinao ny marika avy any ivelany ary mampiseho ny fomba ahafahana manatsara ny fomba fijery izany. Ireo fomba fijery ireo dia manampy anao amin'ny famolavolana politika fiaraha-miasa mahomby.
Lazao fa mahazo isa 70% ianao amin'ny fanadinana iray. Mazava ho azy fa lasa io, fa ny vokatra dia tsy midika hoe be loatra ny fahafantaranao hoe nanao ahoana ny hafa. Toy izany koa, tsy fantatrao ny dikan'ny famakafaranao SEO mandra-ampitahanao ny tenanao amin'ireo mpifaninana aminao.
Ny famakafakan'ny mpifaninana dia mampiasa teknika mitovy toa etsy ambony hahalalanao ny fomba fijerin'ny dian-tongotra dizitaly amin'ireo fanoherana mivantana. Toa eo amin'ny toerana misy ireo orinasa ireo no misy azy ireo, ary inona no ataon'izy ireo ho tonga any.
Ary ankehitriny ho an'ny hetsika lehibe. Rehefa avy nanangona ireo famakafakana rehetra ianao dia fotoana tokony hametrahana ny fahalalanao. Ny tanjona farany amin'ny SEO dia ny hahazoana ny laharan'ny tranokalanao amin'ny motera fikarohana ho an'ny teny manan-danja mifandraika amin'izany, ka rehefa avy nanadihady ny tsirairay amin'ireo singa fandraisana anjara ianao dia izao ny fotoana hamakafakana ny valin'ny ezaka ataonao.
Ny famakafakana ny laharan'ny teny fanalahidy tsara dia ho mahazatra (tanterahina tsara isan'andro) ary feno. Hanara-maso ny toerana misy anao amin'ny milina fikarohana maro izany ary hanome anao ireo fiana ilainao hanatsarana ny laharanao. Haneho ny tenany ho sarobidy izy io amin'ny fanerena anao ireo laharana amin'ny fotoana.
Mampiasa Semalt Analytics hamaritana ny asanao SEO
Semalt Analytics dia mametaka ny boaty rehetra etsy ambony. Fitaovam-pikarohana momba ny mari-pahaizana matihanina ho an'ny matihanina, natao hanolorana anao ny fahitana mazava momba ny toe-piainan'ny SEO misy anao ankehitriny ary hamokatra fijery tsy misy dikany izay hahita anao miakatra ny laharan'ny fikarohana ho an'ny teny fanalahidy mifandraika indrindra.
Ny Semalt Analytics dia miasa amin'ny:
Manangona ny angon-drakitra momba ny tranonkala
Miteraka tatitra momba ny toerana misy anao SEO sy ny mpifaninana aminao
Manome lisitr'ireo teny fanalahidy izay hanatsara ny tranokalanao ary hampitombo ny fifamoivoizana
Manohana ny ezaka SEO ataonao hatramin'ny enina fikarohana marobe samihafa
Fakafakao ny laharana amin'ny fotoana tena izy ary mitatitra tatitra SEO isan'andro
Ny fanendrena mpikarakara ny fizahana manokana hanara-maso ny fizotrany rehetra
Semalt Analytics dia manome anao ny vaovao. Izay ataonao amin'ireo hevitra ireo dia miankina aminao. Azonao atao ny misitraka azy ireo, na afaka manatona manam-pahaizana momba ny Semalt SEO ianao, izay afaka mitari-dalana anao amin'ny alàlan'ny fampiharana ity fahalalana vaovao ity.
Ny fikarohana optimization fikarohana dia ady maharitra. Mihetsika tsy mihetsika ny mpitendry tanjona ary mitady hahatratra anao hatrany ny mpifaninana. Saingy amin'ny fahafantaranao ny fitsipiky ny lalao, ary amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana marani-tsaina izay manome anao tombontsoa tsara indrindra amin'ny fahombiazana, dia azo antoka kokoa ianao fa hivoaka amin'ny ady mandresy.
Koa maninona no miandry? Maimaim-poana ny manomboka amin'ny Semalt Analytics - azonao atao ny manampy ny tranonkalanao amin'ny PRO Analyze dieny izao nefa tsy mandoa vola iray, ary ho hitanao marina ny fomba hahatratraranao ny fahombiazan'ny SEO.